Buy night view glass 12 (12,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
night view glass 12
2017 မှာ နောက်ဆုံးပေါ် modified လုပ်ပေးထားတဲ့
မျက်မှန် ( ညကြည့် ) မျက်မှန်??
မျက်စိမစူး အလင်းမစူးဖို့ ညအခါ ညကြည့်မျက်မှန်လိုအပ်ပါတယ်
နေပူထဲသွားရင် ကားမောင်းရင် နေကာမျက်မှန်က မရှိမဖြစ်ပါ???????
Highway ကားမောင်းရင် လိုအပ်သလို မီးကြီးထိုးလို့ မျက်စိစူးတတ်ရင် အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်??????????????
တစ်ခြားဆိုင်မှ ပစ္စည်း များ တာဝန်မယူပါ
လိပ်စာ အတိအကျ ပေး ပြီး ??09264686461
သို့ 09 768484878 or 09784419671 or
sms ပို့ ပြီး မှာယူနို င်ပါတယ် Fb chat box မှတဆင့် လည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်
Viber + 9264686461 . +959768484878
ပစ္စည်း မှာပြီးမယူ ဖြစ်ပါက delivery ခ ရှင်းပေးရပါမယ်ရှင့် ။
အမှတ် ၁၃၂၊ ၄လွှာB၊ ဗဟိုလမ်း၊ G1 ကားရေဆေးဘေး၊ သဇင်ကြေးအိုး အပေါ်ထပ်
??မနက် ၉ နာရီ မှ ည ၅ နာရီ အထိ လာရောက် ဝယ်ယူနိုင် ပြီး
??ဖုန်းဖြင့် မှာလိုပါက ၂၄ နာရီ ထိ ဆက်သွယ် မှာယူ နိုင်ပါသည်။
ဖုန်းမကိုင်ပါက မနက်ရုံးချိန်တွင် ပြန်ခေါ်ပေးပါမည်။
ကျန်သော အချိန်များ sms ပို့ပြီး ဖြစ်စေ
Viber မှ ဖြစ်စေ
Chat box မှ ဖြစ်စေ
နယ်မြို့ကြီး များ Door to Door စနစ်ရှိပါသည်။ အိမ်ရောက်မှ ငွေချေစနစ်ဖြစ်သည်။
ပစ္စည်း မှာပြီး ပစ္စည်း မယူ ဖြစ်ပါက delivery ခ ရှင်းပေးရပါမယ်ရှင့် ။
အိမ်အရောက် မရသော မြို့ များ ဘဏ်မှ ငွေလွှဲ ပြီး
ဖြတ်ပိုင်း ပြ ပြီး နောက်တစ်ရက် ပစ္စည်း ကားဂ်ိတ် ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
ဈေးနှုန်း – 12000
မတွေ့မှာ ဆိုးလို့ မိမိ Wall မှာ Share ထားခြင်းဖြင့်အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိင်ပါတယ်ရှင့်..
မိမိတို့စက်အကြောင်းလေးကို ပြည့်စုံ စွာဖတ်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
အမည်: night view glass 12